युवाको फव्वारा: पूरकको रूपमा NAD + र NMN
/ब्लग/ग्यालरी/"युवाको फोहरा": पूरकको रूपमा NAD + र NMN
प्रकाशित 03 / 03 / 2021 by 阿斯劳 मा लेखियो ग्यालरी.
एनएमएन पूरकले कसरी चूहोंको शरीरमा एनएडीलाई स्पाइक गर्दछ भन्ने वैज्ञानिक खोजको विमोचनले अखबार र म्यागजिनको हेडलाइटमा हिर्काएको हो र यस खोजलाई “युवाहरूको फव्वारे। "
अध्ययनले भन्छ कि पुरानो चूहों कम्पाउन्ड दिएपछि युवा, ऊर्जावान र पातलो भए। यसैले, तपाइँ पूरक लिएर तपाइँको बुढेसकाल प्रक्रिया उल्टाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाइँ तपाइँको डाक्टर संग कुनै पूरक लिने छलफल गर्नुपर्छ।
HisNMN र NAD + को tory
निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड, वा NAD संक्षेपमा, शरीरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र बहुमुखी अणुहरू मध्ये एक हो। किनकि यो कोष ऊर्जाको साथ केन्द्रमा रहेको छ, त्यहाँ लगभग कुनै जैविक प्रक्रिया छैन जुन NAD को आवश्यकता छैन। यसको परिणाम स्वरूप, एनएडी व्यापक जैविक अनुसन्धानको फोकस हो।
१ 1906 ०। मा, आर्थर हार्देन र विलियम जोन यंगले ब्रेवरको खमीरबाट निकालेको तरलमा "कारक" पत्ता लगाए जसले चिनीको किण्वनलाई रक्सीमा पार्दछ। त्यो "कारक", त्यसबेला एक "coferment" भनिन्छ, NAD बने।
हान्सले हान्स भोन युलर-चेल्पिनसँगै किण्वनको रहस्य छुटाउन जारी राख्यो। रासायनिक आकार र चाँडै नै एनएडी भनेर चिनिने गुणहरूको गुणसहित यी प्रक्रियाहरूको विस्तृत समझ विकास गर्नका लागि तिनीहरूलाई १ 1929 २ They मा नोबेल पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो।
एनएडीको कथा १ 1930's० को दशकमा विस्तार भयो, अर्का नोबेल पुरस्कार विजेता ओट्टो वारबर्गको अगुवाईमा जसले धेरै जैव रसायनिक प्रतिक्रियाहरू सहज पार्न एनएडको केन्द्रीय भूमिका पत्ता लगाए। वारबर्गले पत्ता लगाए कि NAD इलेक्ट्रोनहरूको लागि जैविक रिलेको एक किसिमको रूपमा काम गर्दछ। एक अणुबाट अर्को अणुमा इलेक्ट्रोनको स्थानान्तरण, सबै जैव रासायनिक प्रतिक्रियाहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक ऊर्जाको लागि आधारको रूपमा काम गर्दछ।
सन् १ 1937 XNUMX मा, म्याडिसनको विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालयका कोनराड एल्वेहजेम र सहकर्मीहरूले पत्ता लगाए कि एनएडी + पूरकले पेलेग्रा वा “कालो भाषा” को कुकुरहरूलाई निको पार्छ। मानवमा, पेलाग्राले धेरै लक्षणहरू निम्त्याउँछ, जसमा पखाला, डिमेन्शिया, र मुखमा घावहरू छन्। यो नियासिन अभावबाट उत्पन्न हुन्छ र अब नियमित रूपमा निकोटीनामाइडको उपचार गरिन्छ, NMN को अग्रगामीहरू मध्ये एक हो।
आर्थर कोर्नबर्गले AD० र 40० को अवधिमा एनएडी + मा गरेको अनुसन्धानले उनलाई डीएनए प्रतिकृति र आरएनए ट्रान्सक्रिप्शनको पछाडि सिद्धान्तहरू पत्ता लगाउन सहयोग पुर्‍यायो जुन जीवनका लागि दुई महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो। १ 50 1958 मा, जैक प्रेस र फिलिप ह्यान्डलरले तीन जैव रसायनिक चरणहरू पत्ता लगाए, जसको माध्यमबाट निकोटिनिक एसिड एनएडीमा परिवर्तन हुन्छ। चरणहरूको यो श्रृंखला, एक मार्ग भनिन्छ, आज प्रेस-ह्यान्डलर मार्गको रूपमा परिचित छ।
१ 1963 XNUMX मा, चेम्बन, वेइल र मन्डेलले रिपोर्ट गरे कि निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) ले महत्वपूर्ण आणविक ईन्जाइम सक्रिय गर्न आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्दछ। यस खोजले PARP नामक प्रोटिनमा उल्लेखनीय खोजहरूको श्रृंखलाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। PARPs डीएनए क्षति मर्मत गर्न, कोशिका मृत्युलाई नियमित गर्न, र जसको गतिविधि जीवन परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
सन् १ 1976 .XNUMX मा, रेचेस्टाइनर र उनका सहयोगीहरूले एनआईडी + ले स्तनपायी कोशिकामा “अरू केही प्रमुख फंक्शन” भएको, ऊर्जा स्थानान्तरण अणुको रूपमा यसको शास्त्रीय जैव रासायनिक भूमिका भन्दा परेको छ भन्ने ठोस प्रमाण पाए।
यस खोजले लियोनार्ड ग्वारेन्टे र उनका सहयोगीहरूलाई पत्ता लगाउन सम्भव तुल्यायो कि सिर्टुइन्स भनिने प्रोटिनहरूले NAD प्रयोग गरेर केही जीनलाई “मौन” राखेर जीवन विस्तार गर्न प्रयोग गर्दछन्। त्यसबेलादेखि, एनएडी र यसका मध्यस्थहरू, एनएमएन र एनआरमा चासो बढेको छ, उनीहरूको उमेरसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याहरूको सम्भावित क्षमताको लागि।
Wटोपी फूडहरू NMN समावेश गर्दछ?
एनएमएन स्वाभाविक रूपमा खाना जस्तै avocado, ब्रोकोली, बन्दकोबी, र टमाटर मा देखा पर्दछ। अब, तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ: "यदि एनएमएन खानामा फेला पर्दछ भने, के म यी बढी खाना खाएर मेरो एनएडी + को स्तर बढाउन सक्दिन? "यो राम्रो प्रश्न हो र हामी तपाईलाई स्वस्थ आहार लिन प्रोत्साहित गर्दछौं। तर, मुद्दा यहाँ छ:
यद्यपि एनएमएन यी खानाहरूमा देखा पर्दछ, सांद्रता खानाको एक किलोग्राम प्रति 1 मिलीग्राम भन्दा कम हुन्छ। अर्को शब्दहरुमा, लगभग १mg NMN प्राप्त गर्न, तपाईले १ किलोग्राम ब्रोकोली खानु पर्छ!
यो पत्ता लाग्यो कि मानवमा NAD + को स्तर बढाउन, NMN का स्तरहरू प्रति खुराक सयौं मिलीग्राममा हुनुपर्दछ। यो हामी हाम्रो भोजनबाट प्राप्त गर्न सक्ने भन्दा धेरै माथि छ, चाहे हामी जतिसुकै ब्रोकोली खायौं।
AASraw पूरकको रूपमा NAD + & NMN का पेशेवर निर्माता हो।
NMN का साथ पूरक किन?
हामीले देखाएझैं NMN ले NAD + सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब हामीसँग हाम्रो शरीरमा एनएडी + को उच्च स्तर हुन्छ, सेलुलर उर्जा बढ्छ जुन जीवनको ईन्धन बन्छ - हाम्रो शरीरमा प्रत्येक अ and्ग र कोषलाई शक्ति प्रदान गर्दछ र हामीलाई डीएनए क्षतिबाट बचाउँछ। NAD + ले Sirtuins पनि सक्रिय गर्दछ जुन हाम्रो जीवन प्रत्याशा बढाउन र बुढ्यौलीको प्रक्रियालाई सुस्त बनाउनको लागि आवश्यक छ।
NMN को साथ पूरकले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो शरीरमा NAD को स्तर बढाउँछ, जुन हाम्रो उमेरको रूपमा देखा पर्ने प्राकृतिक गिरावटको प्रतिकार गर्दछ। अनुसन्धानले देखायो कि NMN सँग पूरक भएर, NAD + स्तरहरू पाको उमेरकामा २० वर्षको उमेरसम्म पुग्न सकिन्छ!
(1) निकोटीनामाइड एडेनिन डिनुक्लियोटाइड (NAD +) के हो र यसको कामहरू?
NAD + जीवन र सेलुलर प्रकार्यहरूको लागि आवश्यक एक आवश्यक coenzyme हो। इन्जाइमहरू उत्प्रेरक हुन् जसले जैव रासायनिक प्रतिक्रियाहरू सम्भव बनाउँदछन्। कोएनजाइमहरू "सहयोगी" अणुहरू हुन् जसले ईन्जाइमहरूलाई काम गर्न आवश्यक हुन्छ।
पानीको बाहेक शरीरमा एनएडी + सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा अणु हो, र यो बिना, एक जीव मर्नेछ। NAD + लाई शरीरमा धेरै प्रोटिनहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै sirtuins, जसले क्षतिग्रस्त डीएनए मर्मत गर्दछ। यो माइटोकन्ड्रियाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ, जुन कोशिकाको पावरहाउस हो र हाम्रो शरीरले प्रयोग गर्ने रासायनिक उर्जा उत्पादन गर्छ।
(2) विधिहरू NAD + स्तर बढाउन
उपवास वा क्यालोरी सेवन कम गर्ने, राम्रो क्यालोरी प्रतिबन्धको रूपमा परिचित, NAD + स्तरहरू र sirtuin गतिविधि वृद्धि देखाइएको छ। चूहोंमा, क्यालोरी प्रतिबन्धबाट बढेको NAD + र sirtuin गतिविधि बुढेसकालको प्रक्रिया सुस्त देखाइएको छ। जे होस् NAD + केहि खाद्य पदार्थ मा उपस्थित छ, सांद्रता इंट्रासेलुलर सांद्रता को प्रभावित गर्न को लागी कम हो। केहि पूरकहरू लिने, जस्तै NMN, NAD + स्तर बढाउन देखाइएको छ।
(3) NAD+ NMN को रूपमा पूरक
सामान्य सेलुलर प्रकार्यहरू NAD + समयको साथ आपूर्ति घट्दा उमेरबाट NAD + को इन्ट्रासेलुलर सांद्रता घट्छ। NAD + को स्वस्थ स्तरहरू NAD + पूर्वसूचकहरूको साथ पूरक द्वारा पुनर्स्थापनाको रूपमा लिइन्छ। अनुसन्धानका अनुसार, पूर्ववर्तीहरू जस्तै NMN र निकोटीनामाइड राइबोसाइड (NR) NAD + को पूरकको रूपमा हेरिन्छ, NAD + को बढ्दो सांद्रता। हार्वर्डका एक एनएडी + अनुसन्धानकर्ता डेभिड सिन्क्लेयर भन्छन्, "NAD लाई पोसाक वा सिधा जीवहरुमा प्रशासन गर्नु व्यावहारिक विकल्प होइन। NAD + अणु सजिलै सेल कोशिका प्रवेश गर्न कोशिका झिल्ली क्रस गर्न सक्दैन, र त्यसैले सकारात्मक रूपले मेटाबोलिज्म असर गर्न अनुपलब्ध हुनेछ। यसको सट्टामा, NAD + लाई अग्रदूत अणुहरू NAD + को बायोउपलब्ध स्तर वृद्धि गर्न प्रयोग गरिनु पर्छ। " यसको मतलब NAD + प्रत्यक्षको रूपमा प्रयोग हुन सक्दैन पूरै, किनकि यो सजिलैसँग अवशोषित हुँदैन। एनएडी + अग्रदूतहरू एनएडी + भन्दा सजिलैसँग अवशोषित हुन्छन् र अधिक प्रभावकारी पूरकहरू हुन्।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (CAS:1094-61-7) लाई NMN पनि भनिन्छ, जुन प्राकृतिक रूपले हुने यौगिक हो जुन मानव शरीरमा थोरै मात्रामा साथै केही खाद्य पदार्थहरूमा हुन्छ। NMN मौखिक रूपमा जैवउपलब्ध हुन्छ, र जब मौखिक रूपमा लिइएको हुन्छ तब कलेजो र मांसपेशीय टिशू भित्र NAD + स्तर समर्थन गर्न सक्छ।
※ कसरी शरीरमा NMN Synthesized छ?
एनएमएन शरीरमा बी भिटामिनबाट उत्पादन गरिन्छ। शरीरमा NMN बनाउनका लागि जिम्मेवार इन्जाइमलाई निकोटिनमाइड फास्फोरिबोसिलट्रान्सफेरेस (NAMPT) भनिन्छ। NAMPT ले निकोटीनामाइड (एक भिटामिन B3) लाई चिनी फास्फेटमा PRPP (5'-phosphoribosyl-1-pyrophosphate) भनिन्छ। एनएमएन पनि 'निकोटिनमाइड राइबोसाइड' (NR) बाट फास्फेट समूह को माध्यम बाट बनाउन सकिन्छ।
'NAMPT' NAD + को उत्पादनमा दर-सीमित एन्जाइम हो। यसको मतलब NAMPT को तल्लो स्तर NMN उत्पादन कम भयो, परिणामस्वरूप NAD + स्तर कम भयो। पूर्ववर्ती अणुहरू NMN थपेमा NAD + उत्पादनको गति पनि बढ्न सक्छ।
NMN का सम्भावित लाभ
जनावरको कोषहरू भित्र एकचोटि, NMN ले NAD + को उत्पादनमा फिड गर्छ, जसले कोशिकालाई आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्दछ र स्वस्थ बुढेसकालको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ। NAD + ले प्रोटीनहरू सक्रिय गर्नमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ जुन हाम्रो DNA को सत्यता कायम गर्दछ। यति धेरै सेलुलर प्रक्रियाहरूमा यसको केन्द्रीय भूमिका दिएर, NMN का सम्भावित लाभहरू सबै शरीर प्रणालीहरूमा विस्तार हुन्छन्। तल केहि राम्रा-ज्ञात उदाहरणहरू छन्।
❶ संवहनी स्वास्थ्य र रगत प्रवाह प्रचार गर्दछ
हामी आन्दोलन, स्थिरता र शक्तिका लागि हाम्रो कंकाल मांसपेशीहरूमा भर पर्दछौं। बलियो र राम्रो अवस्थामा रहन यी मांसपेशीहरूले ग्लुकोज र फ्याट्टी एसिडहरू जस्ता महत्वपूर्ण ऊर्जा अणुहरूको महत्त्वपूर्ण मात्रामा उपभोग गर्न आवश्यक छ। किनकि एनएडी + यी अणुहरूलाई मेटाबोलिज गर्न आवश्यक छ, हाम्रो मांसपेशीहरूलाई यसको निर्माण ब्लकहरूको स्थिर आपूर्ति चाहिन्छ, जस्तै NMN।
चूहोंका अध्ययनहरूले देखाए कि एनएमएनले स्वास्थ्यमा उमेरसँग सम्बन्धित धेरै गिरावटबाट जोगाउँछ, जस्तै रक्त वाहिनाहरूको कडाइ, अक्सिडेटिभ तनाव, हाम्रो कोषको विभाजन गर्न सक्ने क्षमता, र हाम्रो जीन कत्तिको सक्रिय हुन्छन् भन्ने कुरालाई परिवर्तन गर्दछ, जसलाई वैज्ञानिकहरू जीन भन्छन् अभिव्यक्ति
❷ मांसपेशी सहनशीलता र शक्ति सुधार गर्दछ
अध्ययनहरूले देखाए कि चूहोंले पोषण दिए NMN लाई लामो समय अवधिमा राम्रो ऊर्जा चयापचय थियो जुन कुनै स्पष्ट साइड इफेक्टको साथ छैन। हाम्रो उमेर र NAD + को आफ्नै आपूर्ति घट्दै जाँदा हाम्रो मांसपेशीहरूको स्वास्थ्य बढ्दै जान्छ।
❸ हृदय रोगको बिरूद्ध बचाउँछ
कमसेकम तपाइँको कंकाल मांसपेशिहरु ब्रेक लिन को लागी। न केवल तपाईको मुटुले आराम लिन सक्दछ, यसले गम्भीर समस्याहरूको कारण बिना यसको गतिलाई सुस्त पार्न पनि सक्दैन। मुटुको उर्जाको आवश्यकता धेरै हुन्छ। र यसलाई टिक टिक राख्नको लागि, यो सबै NAD + गर्न सक्दछ। यही कारणले गर्दा कार्डियक कोषहरूलाई NMN को स्थिर आपूर्ति चाहिन्छ।
❹ मोटापाको जोखिम कम गर्दछ
मोटोपना अस्वास्थ्यकर स्थितिको विस्तृत सरणीसँग जोडिएको छ र उपचार गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। मोटाई र सम्बन्धी शर्तहरू जस्तै मधुमेह र मेटाबोलिक सिन्ड्रोमको लागि कुनै सजिलो उपाय छैन। जबकि जीवनशैली समायोजनहरू जस्तै व्यायाम र स्वस्थ आहार सर्वोपरि महत्त्वको हुन्छन्, प्रत्येक सानो थोरै मद्दत गर्दछ।
माउस अध्ययनमा, NMN ले प्रभाव प्रदर्शन गर्दछ जुन क्यालोरी प्रतिबन्ध (CR) को पक्षहरूको नक्कल गर्दछ। जे होस् सीआरले उमेर र स्वास्थ्यमा असंख्य फाइदाहरू प्रदान गरेको देखाइएको छ, यो लामो समयावधिको लागि धान्न कठिन प्रणाली हो। त्यस्तो चरम आहारलाई पछ्याई यसको फाइदाको नक्कल निर्विवाद फाइदाजनक हुनेछ।
❺ डीएनए मर्मतको मर्मत सुधार गर्दछ
NAD + NMN बाट बनेको प्रोटीनको समूह सक्रिय गर्दछ sirtuins। Sirtuins, कहिलेकाँही हाम्रो हेल्थस्प्यानको संरक्षकको रूपमा सोचाइ राखिन्छ, डीएनए अखण्डता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्रत्येक पटक जब हाम्रो कोषहरू विभाजन हुन्छन्, हाम्रो क्रोमोसोमको अन्ततिरको डीएनए एक सानो बिट छोटो हुन्छ। निश्चित बिन्दुमा यसले हाम्रो जीनलाई हानी पुर्‍याउँछ। Sirtuins ले ती बिट्सहरू स्थिर गर्दै यस प्रक्रियालाई ढिलो गर्दछ, वैज्ञानिक रूपमा टेलोमेरेस भनेर चिनिन्छ। कार्य गर्नको लागि, तथापि, sirtuins NAD + मा निर्भर गर्दछ। भर्खरको अध्ययनले देखाईएको छ कि चूहों NMN सक्रिय sirtuins खुवाउँदा र अधिक स्थिर telomeres को नेतृत्व।
❻ Mitochondrial प्रकार्य बढाउँदछ
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी हाम्रो माइटोकन्ड्रिया बिना बाँच्न सक्दैनौं। यी अद्वितीय सेलुलर संरचनाहरू सेलको पावरहाउसहरू भनेर चिनिन्छन्। उनीहरूले खानेकुराबाट अणुहरू रूपान्तरण गर्छन् जुन हाम्रो कोशिकाले प्रयोग गर्ने उर्जामा परिवर्तन गर्दछ। NAD + यस प्रक्रियाको लागि केन्द्रीय हो। वास्तवमा, एनएडी + को नोक्सानीको कारण मिटोकोन्ड्रियल विसंगतिले अल्जाइमर जस्ता न्यूरोलॉजिकल डिसअर्डरहरूलाई पनि असर गर्न सक्छ। चूहोंमा गरिएको अध्ययनले देखायो कि एनएमएन पूरकले केही माइटोकन्ड्रियल डिसफंक्शन बचायो।
AASrawको NMN पाउडर केही मिनेट भित्रमा तपाइँको शरीरमा NMN को स्तर बढाउँछ, जबकि NAD + स्तर 60० मिनेट भित्र बढाइन्छ। जे होस्, NAD + को लागि तपाइँको कक्षहरू कायाकल्प गर्न को लागी, यसले सामान्य रूपमा केहि हप्ता लिन सक्दछ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरूले रिपोर्ट गरे कि तिनीहरू २ देखि weeks हप्ता भित्रमा जवान र स्वस्थ महसुस गर्दछन्। NMN का पूर्ण लाभ केही महिनाको प्रयोग पछि महसुस गर्न सकिन्छ - तर तपाईं पहिले नै केही हप्तामा फरक महसुस गर्नुहुनेछ!
त्यसोभए यदि तपाईं AASraw को NMN का रूपान्तरण प्रभावहरू अनुभव गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईसँग अब त्यस्तो अनौंठो अवसर छ। र सबै भन्दा राम्रो भाग? तपाईंले कुनै जोखिम लिनुपर्दैन। AASraw को NMN एक संतुष्टि ग्यारेन्टीले कभर गरेको छ। यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू पक्का निश्चित छन् कि तपाईं उनीहरू NMN लाई माया गर्नुहुनेछ, तिनीहरू तपाईंलाई ग्यारेन्टी प्रदान गर्न तयार छन्।
NMN पूरक को साइड इफेक्ट
कुनै पनि अपेक्षाकृत नयाँ संग पूरै, त्यहाँ साइड इफेक्टको बारेमा चिन्ताहरू छन्। अहिले सम्म, वैज्ञानिक अध्ययनहरूले कुनै पनि खतरनाक वा निर्णायक साइड इफेक्ट देखाईएको छैन यो पूरक प्रयोगको साथ जडित।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइडको बारेमा मात्र कडा गुनासो भनेको प्रभावकारितामा विसंगति हो, तर त्यो नयाँ पूरकको विकासको चरणहरूमा हुन्छ। अवश्य पनि, तपाइँ यो पूरक लिने बारेमा तपाइँको डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराईरहनुभएको छ।
Is NMN Better Tहान NAD +?
धेरै वर्षसम्म, यो सोच्न थाल्यो कि NAD + अणुहरू सिधा लिनको लागि धेरै ठूलो थियो र NMN जस्ता पूर्ववर्तीको प्रयोग गरेर उठाउन आवश्यक थियो। भर्खरै यो पत्ता लागेको छ कि NAD + ले रक्त-मस्तिष्क अवरोध पार गर्न सक्दछ र यदि sublingually लिईन्छ भने हाइपोथैलेमसमा पुग्न सक्छ। यसले यस ग्रन्थीमा NAD + स्तर बढाउन सक्छ जसले सम्पूर्ण शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ किनभने यसले मेटाबोलिजमलाई नियन्त्रण गर्दछ। यो पनि एक सम्भाव्य हुन सक्छ पूरै Hypophalamus मा NAD + स्तर कम भएकोले मेटाबोलिक डिसआर्डर भएकालाई मद्दत गर्न।
NMN, अर्कोतर्फ, शरीरभरि कोशिकाहरूमा NAD + स्तरहरू माथि उठाउँदछ र तपाईंको समग्र NAD + स्तर र ढिलो उमेरलाई बढावा दिनको लागि उत्तम पूरक हो।
निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) तपाईको शरीरमा एक प्राकृतिक तत्व हो जसले निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइनोक्लियोटाइड भनिने अर्को कम्पोनेन्टको उत्पादनलाई उत्तेजित गर्दछ। दुबै एनएमएन र एनएडीले बुढेसकालको प्रक्रिया रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। मुख्यतया NAD, तपाईले जति पुरानो पाउनुहुनेछ, तपाईको शरीरले NAD उत्पादन गर्न सक्ने कम सम्भावना हुन्छ। जहाँ NMN पूरकले मद्दत गर्न सक्दछ, जब चूहों द्वारा सेवन गरेपछि, यसले तत्काल तल्लो आन्द्रामा NAD लाई उत्तेजित गर्दछ।
नतिजाको रूपमा, पूरकलाई "युवावस्थाको फोहरा" लाई जोडिएको छ, र शरीरको बुढेसकालको प्रक्रिया ढिलो हुन्छ र आफैमा उल्टो हुन्छ। अध्ययनले मात्र एन्टी-एजिंग प्रक्रियाको वैधता प्रमाणित गरेको छैन, तर NMN पूरकले क्यान्सर, मुटु र मधुमेह जस्ता अन्य रोगहरू रोक्न वा उपचार गर्न पनि मद्दत गर्दछ। २०१ 2016 मा, वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले मानव क्लिनिकको सकारात्मक प्रभावहरूमा पहिलो क्लिनिकल अध्ययन सुरु गर्‍यो NMN पूरक लिदै। यद्यपि एनएमएनको प्रभावकारिता अझै शुरुआती चरणहरूमा छ, अधिक र अधिक रिपोर्टहरूले पूरकको प्रभावकारिता मान्य गर्दछ।
जब तपाईं NMN पूरक अनलाइन खरीद गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, कृपया NMN र NAD + को बारेमा अधिक लेखहरू पढ्नुहोस्। यो जान्नु आवश्यक छ कि यो तपाईंको शरीरको लागि राम्रो छ कि छैन, कसरी तपाईंको शरीरमा काम गर्दछ, जब तपाईं यो लिनुहुन्छ र NMN को खुराक, तपाईंमा कुनै जोखिम। भविष्यमा NMN को बारे मा अधिक अपडेटको लागि हामीलाई अनुसरण गर्न Weclome।
संदर्भ लेख को लागी
 लौट्रप एस, सिन्क्लेयर डी एट अल। २०१.। NAD + ब्रेन एजिंग र न्यूरोडोजेरेटिभ डिसआर्डरमा। सेल मेटाबोलिज्म ,०,1०-2019।।
 झाhang, एच।, २०१.। NAD + रिप्लेसनले माइटोकन्ड्रियल र स्टेम सेल प्रकार्य सुधार गर्दछ र चूहोंमा जीवन काल बढाउँदछ। विज्ञान22016२, १352-१1436।।
] "एनएमएन बनाम एनआर: यी दुई बीचको मतभेद" एनएडी + पूर्ववर्तीहरू "। www.nmn.com। २०२१-०१-११ लाई पुनः प्राप्त गरियो।
] इमाइ, एस।, र ग्वारेन्टे, L. २०१.। NAD र बुढेसकाल र रोगमा sirtuins। सेल जीवविज्ञान, २4()), 2014 24--8 मा प्रचलनहरू।
] ब्रैडी, सीके लिम, आर। ग्रान्ट, बीजे ब्रू, र जीजे गुइलमीन। २०१.. मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा रोग कोर्सको माध्यमबाट सीरम निकोटिनमाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड। ब्रेन रेस १ 5:: २2013-२1537।
 स्टिप्प डी (मार्च ११, २०१ 6) "Resveratrol पछाडि: The Anti-Aging NAD Fad"। वैज्ञानिक अमेरिकी ब्लग नेटवर्क।
] प्रोला, टी।, डेनु, जे २०१ 7। उमेर सम्बन्धित मिटोचोंड्रियल डिसफंक्शनमा NAD कमी। सेल मेटाबोलिज्म, (१ (१), -19 2-१०178।
] फ्लेचर आरएस, लाभ्री जीजी (अक्टुबर २०१ 8) "एनएडी + मेटाबोलिजमको नियमनमा निकोटिनमाइड राइबोसाइड किनेससको उदय।" आणविक Endocrinology को जर्नल। (१ ()): R2018 – R61। doi:3/ JME-107-121 PMC 10.1530. PMID 18।
Pregabalin को बारे मा तपाइँ सबै कुरा जान्नु पर्छ	Minutes० मिनेट Nootropic Pramiracetam-AASraw जान्नको लागि